Indoda Nesifazane Nengane - I-Word Foundation • Funda ngawe
Le ncwadi engavamile, ebhalwe phansi nje, ivula ama-vistas emasimini ahlanganisiwe emfihlakalo iminyaka emakhulu. Lapha uzofunda ukuthi isinyathelo sokuqala sokuzalwa kabusha okungokomoya ukuqonda ukwehla komuntu emzimbeni wokufa wokuzalwa nokufa. Nalapha futhi, uzofunda ukuthi ungubani ngempela-uqobo oziqhenyayo emzimbeni-nokuthi ungaphula kanjani i-hypnotic ukupela izinzwa zakho nokucabanga okuphephile ngawe kusukela ebuntwaneni. Uzoqonda, ngokukhanya kokucabanga kwakho, ukuthi kungani umuntu ebumnyameni ngokuphathelene nokuvela kwakhe kanye nesiphetho esizayo. Ekuqaleni kokuphila komzimba omusha, okhulayo, uqala ukuzilungisa ngokwengqondo ekuzicabangeni, ekuzizweni nasekufuneni. Ethonywa yizinzwa zayo, kancane kancane zizibonakalisa ngokuphelele ngomzimba wayo futhi ilahlekelwe ukuthintana nobunikazi bayo beqiniso, obungunaphakade. Umqashi ongekho emthethweni, ekhohlisayo ngokufa kwakhe, uvame ukuphuthelwa ithuba lakhe lokuthola indawo yayo efanele eCosmos futhi akakwazi ukufeza injongo yayo enkulu. Indoda Nomfazi Nezingane ikhombisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani lelo thuba lokuzitholela ukuzitholela!
Funda indoda nomfazi nengane
"Lezi zizathu azisekelwe ezinethemba lokukhohlisa. Baqiniswa yizibonakaliso zesayensi, ezomzimba, eziphilayo kanye nezingokwengqondo ezinikezwe lapha, ongakwenza, uma uthanda, uhlole, ucabange futhi uhlulele; futhi, yenza lokho okucabangayo kangcono. " HW Percival